အိမ်သုံး ဖုန်စုပ်စက် မော်တာ
800W 丨5.7" Tangential by pass brushless blowe...
1200W 丨5.7" Tangential by pass brushless blow...
1200W丨57" ဖြတ်သွားသော brushless DC လေမှုတ်ကိရိယာဖြင့် Tangential
700W丨5.7" ဖြတ်သွားသော brushless DC လေမှုတ်ကိရိယာဖြင့် Tangential
Gas-premix h အတွက် 85W丨6.5" Brushless DC blower
700W丨7.3" Tangential by pass brushless blower...
600W丨5.7" Tangential by pass brushless blower...
1200W丨7.3" Tangential by pass brushless blowe...
အစားအစာ Blender/ ကော်ဖီဖျော်စက်အတွက် NXK2082 brushless မော်တာ
ဖုန်စုပ်စက်အတွက် NXK0482-800 စုတ်တံမဲ့မော်တာ
ဖုန်စုပ်စက်အတွက် NXK0382-800 စုတ်တံမဲ့မော်တာ
လက်အခြောက်ခံစက်အတွက် NXK0270-700 စုတ်တံမဲ့မော်တာ
အပ်ချုပ်စက်အတွက် NXK0276 brushless မော်တာ
ဖုန်စုပ်စက် NXK အတွက် မြန်နှုန်းမြင့် brushless DC မော်တာ...
အစားအသောက်ဖျော်စက်/ကော်ဖီအတွက် NXK2082 brushless မော်တာ...
Blender အသေးအတွက် NXK0134 brushless motor (အိမ်...
ဖုန်း : +86 18067555028
သင့်အိမ်အတွက် စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်ကို မတပ်ဆင်ရသေးပါက၊ ခလုတ်ဆွဲရန် အကြောင်းရင်းကောင်းအချို့မှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်- စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်သည် သင့်အတွက် အလုပ်ဖြစ်နိုင်သည် (ကြီးမားသောလေဟာနယ်ကို ဆွဲထုတ်ရန်မလိုအပ်ပါ)၊ ၎င်းသည် အားလုံးကို စုပ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ အစုလိုက်...
ကြိုးမဲ့ ဖုန်စုပ်စက်များ ကြီးပြင်းလာပါပြီ။LG ၏ CordZero A939 အသစ်သည် သန့်ရှင်းသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်တော့ဘဲ အစွန်းများသာမက သင့်နေ့စဉ်လိုအပ်ရာများဖြစ်လာနိုင်လောက်အောင် အစွမ်းထက်၊ တာရှည်ခံကာ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ဒါပေမယ့် Maxi အတွက်...
ကလေးတွေက ကျွန်ုပ်တို့ကို စောင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အကောင်းဆုံးသင်ယူတတ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့သိပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အိမ်တဝိုက်မှာသုံးနေတဲ့ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကို သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရုပ်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ အံ့သြမနေသင့်ပါဘူး။အိုး နဲ့ အိုး တွေ အတွက် တော့ ဒါ အားလုံး ကောင်း တယ် ၊
© မူပိုင်ခွင့် 2017 : All Rights Reserved. စွမ်းအားဖြင့်